Babongiwe abesifazane | News24
I-BLACK Suit Gentlemen (BSG) Club iphathe abesifazane bePhumlaniM Foundatio (PMF) ngezandla ezintofontofo ukugubha inyanga yabesifazane ezinsukwini ezedlule.
Lenhlangano yabesilisa abasebancane ichithe usuku nalaba besifazane eMargate Hotel ibabonga ngokuziphatha kahle. UPhiwe Mzindle ongumgcinimafa weBSG ubeke inkulumo emfishane ebibaluleke kakhulu ngokuguqulwa kwezinqondo zabantu besilisa emiphakathini esiphila kuyo. UMzindle uqhakambise amazwi akhe athi kumele umuntu wesifazane anikwe uthando futhi ahlale ezazi ukuthi ubalulekile.
“Abesifazane kumele babongwe ngaso sonke isikhathi ngokumelana nakho kone okungalungile okwenziwa abantu besilisa kubona. Uma umuntu wesifazane engase athole okwenziwa umuntu wakhe wesilisa ngesikathi engekho phambi kwakhe kungalimala imindeni eminingi. Ngakho thina njengamadoda kumele sibonge sixolise ngezinto esizenzayo ezingalungile ebantwini besifazane,” kusho uMzindle.
Uqhube inkulumo yakhe wathi njengabantu besilisa bayabona ukubekezela kwabesimame uma amadoda ebatshela ukuthi bahle ngaso sonke isikathi, ikakhulukazi kulesi khathi ekuphilwa kusona manje.
“Kulesikhathi samanje amadoda abona umuntu wesifazane emuhle uma engagqokanga kuphela, yilapho wona ebona ukuthi ume kahle, okungeyona into enhle,” kusho uMzindle.
I-BGS ibiyizimisele ngempela uku khombisa laba besifazane ukuthi babaluleke kanjani.
uMzindle uthe umuntu wesilisa ngesinye isikhathi kumele azifake ezicathulweni zowesifazane azibuze ukuthi yena angakwazi yini ukumelana nezinto ezenziwa abesilisa kwabesifazane.
Ngokusho kwakhe uMzindle, umuntu wesilisa ofundisekile uzinika isikhathi ukuthi azi ngomuntu wesifazane njengomuntu ohlukile kunaye odinga inhlonipho nothando.
Abaningi balenhlangano iPhumlaniM Foundation baphuma emakhaya lapho kunzinyana ukuphila labe ngalutholi khona uthando. UMzindle uthe ingakho njenge BSG nePMF bebatshengisa ukuthi lukhona uthando.
“Umutu wesifazane ungumuntu okwazi ukuvikela umndeni wakhe, onothando lwabanye abesifazane, ohlale enedlela yokuqhubekela phambili. Abesifazane babalulekile emakhaya nase miphakathi esiphila kuyona,” kusho uMzindle.
Ekupheleni kwosuku abesifazane banikwe izipho bakhombisa ukujabula okukhulu
Milnerton 06:47 AM